नेपालमा ‘दुई जोईको पोई कुना बसी रोई’ तर यीनका १३ श्रीमती : रोचक त यो हो सबै एकैपटक गर्भवती ! – Khabaarpati
January 4, 2021 January 4, 2021 goodmamLeaveaComment on नेपालमा ‘दुई जोईको पोई कुना बसी रोई’ तर यीनका १३ श्रीमती : रोचक त यो हो सबै एकैपटक गर्भवती !
काठमाडौं । ‘दुई जोईको पोई कुना बसी रोई’ नेपालमा एक चर्चित उखान छ । तर के तपाँई पत्याउँनुहुन्छ यहाँ एक व्यक्तिले १३ जना श्रीमती सम्हालेर बसेका छन् । एकपटक तपाँई अनुमान गर्नुहोस् कुनै पनि मानिसको श्रीमती कति जना होलान् । अवश्य पनि एक जना नभए दुई जना पनि हामीले थाहाँ पाएको कुरा हो । किनकी कुनै मानिस बरु पटक पटक धेरैसंग प्रेममा पर्न सक्छ । तर जीवन काट्ने साथी अर्थात श्रीमती भने एक मात्र हुन्छन् भन्ने मान्यता रहेको छ ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
November 27, 2020 Khabar Pati